Hisense dia mampiseho telefaona misy efijery fanoratana elektronika miloko | Androidsis
Ny fanavaozana ny indostrian'ny telefaona finday dia nitombo haingana nandritra ny taona lasa. Ny orinasa dia eo an-dalambe mba hijery izay manampy CPU tsara indrindra, RAM bebe kokoa na fitehirizana avo lenta aza, tsy eritreretina taona vitsivitsy lasa izay raha miverina amin'ny 2018 isika.
Te hisongadina amin'ny ambiny i Hisense Avy amin'ny fifaninanana hatramin'ny taona lasa, tao amin'ny CES 2019 dia nasehony anay ny efijery fanoratana elektronika monochrome, na dia efa amam-bolana aza ny fandrosoana. Io Hisense A5 aseho io dia fampisehoana ny zavatra ho avy rehefa afaka kelikely.
Kely ny antsipiriany, saingy manasongadina ny mampiavaka azy ny mampiavaka azy sy ny fanavaozana raha oharina amin'ny A5. Tabilao loko e-ranomainty mazàna izy ireo manana tahan'ny fitsaharana miadana kokoa noho ny fampisehoana monochrome ary zavatra iray izay ampiasaina hanatsarana izany.
Tsy nahita olana namelombelona haingana kokoa ny mpamaky e, fa ny efijery finday avo lenta dia miova kely raha oharina amin'ny mpamaky e. Ny fitsapana voalohany dia miteny ho azy ireo ary I Hisense dia mila asa mafy any amin'ireo ozininy nanomboka ny volana febrily 2019 mba hanehoana filokana hafa.
Ny panneaux e-ink an'ny loko dia handeha hamokatra amin'ny marobe manomboka amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity, na dia tsy nanambara ny fe-potoana farany hanombohana aza ny Aziatika. Voalohany dia hanao fitsapana fitsapana kely izy ireo, rehefa mampiseho singa iray dia misy farafaharatsiny misy fitaovana iray na maromaro misy.
Ny fampisehoana e-Ink dia manome kely ny havizanana ary manolotra famakiana bebe kokoa, noho izany safidy iray ny mieritreritra raha mivarotra izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny miatrika ny famahana ny olan'ny fanavaozana matetika, rehetra raha te hiditra tanteraka ianao ho safidy ho an'ny mpividy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Hisense dia mampiseho telefaona misy efijery e-ink miloko